အဘယ်ကြောင့်စင်ကြယ်တပ်ဆင်ထက်မှာ WINDOWS ကနေအဆင့်မြှင့် - WINDOWS ကို - 2019
အဘယ်ကြောင့်စင်ကြယ်တပ်ဆင်ထက်မှာ Windows ကနေအဆင့်မြှင့်
သော parameters တွေကို, ယာဉ်မောင်းနှင့်အစီအစဉ်များကိုမထိန်းသိမ်းနေစဉ် operating system ကိုအဆင့်မြှင့်စဉ်းစားပါဖော်ပြနေချိန်တွင်ယခင်ညွှန်ကြားချက်များထဲကတစ်ခုမှာတော့ကျွန်မ Windows 8 ၏စင်ကြယ်တပ်ဆင်ဖျော်ဖြေဖို့ဘယ်လိုရေးခဲ့တယ်။ ဤတွင်ကျွန်မ install စင်ကြယ်နီးပါးအမြဲတမ်း update ကိုထက် သာ. ကောင်း၏ရှင်းပြဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
Windows Update ကို program ကိုကယ်တင်နှင့်ထို့ထက် ပို. ရန်
သာမန်အသုံးပြုသူလွန်းကွန်ပျူတာများအကြောင်းကို "နှောငျ့ယှကျ", မအတော်လေးကျိုးကြောင်းဆီလျော်အပ်ဒိတ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်စေခြင်းငှါ - က install လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည် Windows7ကိုကနေ Windows 8 ကိုအဆင့်မြှင့်တင်တဲ့အခါမှာအကြံပေးစာနာသင့်ရဲ့အစီအစဉ်များ, စနစ်ဆက်တင်နှင့်ဖိုင်များများစွာကိုလွှဲပြောင်းရန်ပူဇော် upgrade ။ သိသာအဲဒါကိုပိုပြီးအဆင်ပြေသင်တို့အဘို့ကိုကြည့်ခြင်းနှင့်အပေါငျးတို့သအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းခြင်း, အမျိုးမျိုးသောဖိုင်များကိုကူးယူစနစ်ကို configure ပြန်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Window 8 ကို install လုပ်ပြီးနောက်ထက်ကြောင်းကိုပုံရသည်။
Windows Update ကိုအပြီးအမှိုက်
သီအိုရီစနစ် update ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက် operating system ကို configuration များ၏များစွာသောလုပ်ဆောင်မှုများဖယ်ရှားပစ်ရ, သင်၏အချိန်ကိုကယ်တင်ကူညီသင့်ပါတယ်။ လက်တွေ့တွင်မယ့်အစားသန့်ရှင်းအပ်ဒိတ်များ install လုပ်၏မကြာခဏပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သင်တစ်ဦးသည်စင်ကြယ်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် install လုပ်ဆောင်သည့်အခါအသီးသီးကိုမဆိုစွန့်ပစ်စရာမလိုဘဲ Windows operating system ကို clean ပုံပေါ်ပါတယ်။ သင်က Windows အဆင့်မြှင့်နေကြသည်သောအခါ, installation ပရိုဂရမ်သင့်ရဲ့ဆော့ဖ်ဝဲပရိုဂရမ်, registry ကို entries တွေကိုနှင့်ထို့ထက် ပို. စောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် update ကိုရဲ့အဆုံးမှာသင်တို့ရှိသမျှကိုသင့်ဟောင်းအစီအစဉ်များနှင့် files တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်ရာ၏ထိပ်ပေါ်မှာသစ်တစ်ခု operating system ကို, get ။ မသာအသုံးဝင်သော။ နှစ်ပေါင်းဘို့သင့်ကိုအသုံးပြုသောကြပြီမဟုတ်ကြောင်းဖိုင်များ, ရှည်-ဝေးကွာသောအစီအစဉ်များကနေ registry ကို entry ကိုများနှင့်သစ်ကို OS ကပိုမိုအမှိုက်သရိုက်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အားလုံးမဟုတ်ကြောင်း၏ဂရုတစိုက်အသစ်တစ်ခုကို operating system ကိုပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည် (Windows XP ကိုကနေ Windows7ကိုအဆင့်မြှင့်သည့်အခါသေချာပေါက် Windows 8, တူညီတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလျှောက်ထားမဟုတ်) ပုံမှန်အားဖြင့်အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည် - လိုအပ်သောမည်သည့်ကိစ္စများတွင်အမျိုးမျိုးသောအစီအစဉ်များကိုပြန်လည်။
Windows 8 ကို upgrade သို့မဟုတ် install
Windows 8 မှာစင်ကြယ်တပ်ဆင်အပေါ်အသေးစိတ်, ငါသည်ဤလက်စွဲစာအုပ်၌ရေးသားထားသည်။ အလားတူပင် installed နှင့်အစား Windows XP ကို၏သည် Windows7။ , သာလျှင်တပ်ဆင်ခြင်းကို Windows (အခြား partition ကိုသို့မဟုတ် drive ကိုအားလုံးကိုဖိုင်တွေချွေတာခြင်းဖြင့်) စနစ် hard disk ကို partition ကို reformat နဲ့ Windows ကို install - installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစဉ်အတွင်းသင်တပ်ဆင်ခအမျိုးအစားကိုသတ်မှတ်သာလိုအပ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ် installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဒီ site ပေါ်တွင်အပါအဝင်အခြားလက်စွဲထဲမှာဖော်ပြထားသည်။ အဆိုပါဆောင်းပါးတွင် install စင်ကြယ်အဟောင်း parameters တွေကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နီးပါးအမြဲတမ်း Windows ကိုအဆင့်မြှင့်ထက် သာ. ကောင်း၏ဆိုတဲ့အချက်ကိုအကြောင်းပါ။